आलिया-रंबिर या अर्जुन-मलाइका, कसलाई रोज्छिन् कट्रिना कैफ ! - Sabasta Entertainmnet
आलिया-रंबिर या अर्जुन-मलाइका, कसलाई रोज्छिन् कट्रिना कैफ !
प्रकाशित मिति : June 9, 2019	Sabasta Entertainment
सबस्त ईन्टरटेनमेन्ट,काठमाडौँ – बलिउड मा अहिले लव अनि बिबाह को चर्चा धेरै हुन थालेको छ। बिषेशत आलिया -रंबिर , अर्जुन – मलाइका को नाम यो सूचीमा पर्छ। अहिले त अर्जुन र मलाइका ले पनि आफु दुई बीच को सम्बन्ध स्वीकारिसकेका छन्। जोडी हरुको चर्चा मा सिङ्गल कट्रिना को नाम पनि जोडिएको छ।
रंबिर कपुर कि एक्स कट्रिनाले एक अन्तरवार्ता मा आफुलाई कसको बिबाह मा जान मन छ , बताइन। आलिया -रंबिर र अर्जुन – मलाइका मध्य रोज्नुपर्दा उनले अर्जुन – मलाइकाको बिबाहमा जाने इच्क्षा ब्यक्त गरिन। च्याट शो मा दुवै जोडीको बिबाह एकै दिन एकै समय परे कसको मा जाने भन्ने प्रश्न मा उनले अर्जुन – मलाइकाको जोडी रोजिन्। अर्जुन उनको राखी लगाउने भाइ हुन् , यस कारण पनि अर्जुन को बिबाह उन